Shiinaha S921 Xawaaraha Sare ee sumadeeyaha tuubbada jilicsan Soosaarka iyo Warshad | S-conning
Codso shuruudaha calaamadeynta ee tubbada jilicsan & godan, sidoo kale waa la raaci karaa astaamaha tuubbada jilicsan si loo calaamadeeyo.
Tilmaamaha tuubbada jilicsan ee S921 ee Xawaaraha Sare wuxuu ku hubaysan yahay tiknoolajiyada cusub ee ugu dhakhsaha badan uguna xakamaynta netcon (ikhtiyaar). Hal guji oo keliya shaashaddiisa hal-taabashada ah, waxaad si fudud ugu hagaajin kartaa goobaha kala duwan ee alaabtaadu u baahan tahay.
Mashiinkayaga wadayaasha hawlwadeennada ah wuxuu keenayaa calaamadeynta saxda ah ee xawaaraha sare leh. Qalab hagaajiyeha gacan-ku-hayaha si fudud loo heli karo iyo hagaajinta tareenka dhinac isku xidha ayaa u oggolaanaya in ka badan "waqti-dheer" khadkaaga wax soo saar! S921 waxaa loo adeegsadaa dhammaanba warshadaha sida dawooyinka, alaabada daryeelka shakhsi ahaaneed, cuntooyinka, fiitamiinnada, is qurxinta, iyo kiimikooyinka, halkaasoo kalsoonida ugu fiican ee fasalka ay tahay waajibaadka waxsoosaar wax ku ool ah.
Mashiinka oo dhan waxaa gacanta ku haya kombiyuutarka, dhalooyinka ballan qaadka ee otomaatiga ah lagu ogaanayo
oo calaamadee si isku mid ah, iyo qalab sidoo kale waxaa lagu qalabeyn karaa mashiinka daabacaadda kulul
- Buug-gacmeed lagu dhisay: kuwa bilowga ah waxay wax ka baran karaan bandhigga sida loogu shaqeeyo mashiinnada muddo gaaban gudahood. Tani waxay badbaadinaysaa lacag iyo waqti labadaba inta lagu jiro tababarka.
- Nidaamka dejinta calaamadeynta astaamaha ku habboon-u-adeegsiga: Kontaroolada HMI ee maalinlaha ah ayaa u oggolaanaya adeegsadaha inuu dejiyo xuduudaha astaamaha.
- Nidaamka xakamaynta calaamadaha wuxuu adeegsadaa shaashad taabasho ballaaran, oo ay caddeeyeen xeerarka CE iyo UL ee kormeerka hufan ee wax ku oolka ah ee habka calaamadeynta.
- Nidaamkan gaarka ah ee hal abuurka leh wuxuu damaanad qaadi karaa in qaabeynta astaamaha si sax ah loo agaasimay loona adeegsado booska saxda ah.
- Calaamadeynta ka-hortagga raadraaca tirada alaabooyinka uu mashiinku farsameeyo.
- Miiska horay loo sii dhigay - tiro ayaa loo sii deyn karaa dufcadda wax soo saarka mashiinkuna si otomaatig ah ayuu u joogsan doonaa inta qaddarka la gaarayo.
- Si fudud u taabashada shaashadda ayaa kuu oggolaaneysa inaad dib u dhigto arjiga calaamadda oo aad la qabsato booska sumadda.
Xakamaynta isdabajooga isdabajooga isdabajooga casriga ah wuxuu hubiyaa xasiloonida xawaaraha iyo +/- 0.5% heerka khaldan.
Cabbir (L) 2083 x (W) 929x (H) 1870mm
Cabbirka weelka φ20-50mm (L) 66-185mm
Xaqiijinta shaybaarka ± 0.5 ~ 1.0mm
Hore: Mashiinka calaamadda hoose ee liinta
Xiga: S308 Mashiinka sumadda weelka wareega ee xawaaraha sare
Nidaamka Calaamadeynta Tubada otomaatiga ah
Tube Toos ah
Qalabaynta tubbada otomaatiga ah
Mashiinka Calaamada Tubada
Daabacaha Label Dhalooyinka Qurxinta, Mashiinka Mashiinka Balaastikada, Mashiinka Calaamadaha Dhalada Ganacsi, Nidaamka Syringe iyo Nidaamka Calaamadaha, Top Iyo Labeler Labeler, Mashiinka Codsadaha Label ee Khaanadaha,